17.02.21 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
मीठे बच्चे– तिमी ब्राह्मण नै देवता बन्छौ , तिमीले नै सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउँछौ । त्यसैले तिमीलाई आफ्नो ब्राह्मण कुलको नशा हुनुपर्छ।”
सच्चा ब्राह्मणको मुख्य निशानी कस्तो हुन्छ?
(१) सच्चा ब्राह्मणको यस पुरानो दुनियाँबाट लंगर उठिसकेको हुन्छ। उसले मानौं यस दुनियाँको किनारालाई छोडिसकेका हुन्छ। (२) सच्चा ब्राह्मण ती हुन् जो हातले काम गर्दै बुद्धिद्वारा सदा बाबाको यादमा रहन्छन् अर्थात् कर्मयोगी हुन्छन्। (३) ब्राह्मण अर्थात् कमल फूल समान। (४) ब्राह्मण अर्थात् सदा आत्म-अभिमानी रहने पुरुषार्थ गर्ने। (५) ब्राह्मण अर्थात् काम महाशत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्ने।
रूहानी बाबाले रूहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनु हुन्छ। बच्चाहरू कुनचाहिँ? यी ब्राह्मणहरू। यो कहिल्यै पनि नभुल– हामी ब्राह्मण हौं, देवता बन्छौं। वर्णहरूलाई पनि याद गर्नुपर्छ। यहाँ तिमी आपसमा केवल ब्राह्मण नै ब्राह्मण छौ। ब्राह्मणहरूलाई बेहदका बाबाले पढाउनु हुन्छ। यी ब्रह्माले पढाउँदैनन्। शिवबाबाले ब्रह्माद्वारा पढाउनु हुन्छ। ब्राह्मणहरूलाई नै पढाउनु हुन्छ। शूद्रबाट ब्राह्मण नबनेसम्म देवी-देवता बन्न सक्दैनौ। वर्सा शिवबाबाबाट मिल्छ। उहाँ शिवबाबा त सबैका पिता हुनुहुन्छ। यी ब्रह्मालाई आदिपिता (ग्रेट ग्रेट ग्रेन्ड फादर) भनिन्छ। लौकिक पिता त सबैका हुन्छन्। पारलौकिक पितालाई भक्तिमार्गमा याद गर्छन्। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– यी हुन् अलौकिक पिता जसलाई कसैले जानेका छैनन्। हुन त ब्रह्माका मन्दिर पनि छन्, यहाँ पनि आदि प्रजापिता आदिदेवको मन्दिर छ। उनलाई कसैले महावीर भन्छन्, कसैले दिलवाला पनि भन्छन्। तर वास्तवमा दिल लिनेवाला हुनुहुन्छ शिवबाबा, नकि प्रजापिता आदिदेव ब्रह्मा। सबै आत्माहरूलाई सदा सुखी बनाउने, खुसी पार्ने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। यो पनि केवल तिमीले मात्र जानेका छौ। दुनियाँमा त मनुष्यले केही पनि जानेका छैनन्। तुच्छ बुद्धिका छन्। हामी ब्राह्मणहरूले नै शिवबाबाबाट वर्सा लिइरहेका छौं। तिमीले पनि यो घरी-घरी भुलिहाल्छौ। याद त छ धेरै सहज। योग शब्द संन्यासीहरूले राखेका हुन्। तिमीले त बाबालाई याद गर्छौ। योग सामान्य शब्द हो। यसलाई योग आश्रम पनि भन्न मिल्दैन, बच्चाहरू र बाबा बस्नु भएको छ। बच्चाहरूको कर्तव्य हो बेहदका बाबालाई याद गर्नु। हामी ब्राह्मण हौं, ब्रह्माद्वारा हजुरबुवाको वर्सा लिइरहेका छौं त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ– जति हुन सक्छ याद गरिराख। चित्र राख्यौ भने पनि याद भइरहन्छ। हामी ब्राह्मण हौं बाबाबाट वर्सा लिन्छौं। ब्राह्मणले कहिल्यै आफ्नो जातिलाई भुल्छन् र? तिमी शूद्रको सङ्गतमा आउनाले ब्राह्मणपन भुल्छौ। ब्राह्मण त देवताहरू भन्दा पनि उच्च हुन् किनकि तिमी ब्राह्मणहरू ज्ञानका सागर छौ। भगवानलाई जानी जाननहार भनिन्छ नि। त्यसको पनि अर्थ जानेका छैनन्। यस्तो होइन– सबैको दिलमा के छ, त्यो बसेर देख्नुहुन्छ। उहाँमा सृष्टिको आदि-मध्य-अन्त्यको ज्ञान छ। उहाँ बीजरूप हुनुहुन्छ। वृक्षको आदि-मध्य-अन्त्यलाई जान्नुहुन्छ। त्यसैले यस्ता बाबालाई धेरै याद गर्नु छ। यिनको आत्माले पनि उहाँलाई याद गर्छ। उहाँ बाबा भन्नुहुन्छ– यी ब्रह्माले पनि मलाई याद गर्छन् तब नै उच्च पद पाउँछन्। तिमीले पनि याद गर्यौ भने पद पाउँछौ। पहिला तिमी अशरीरी आएका थियौ फेरि अशरीरी बनेर फर्केर जानु छ। अरू सबै तिमीलाई दु:ख दिनेहरू हुन्, उनीहरूलाई किन याद गर्छौ? मसँग तिम्रो मिलन भएको छ, म तिमीलाई नयाँ दुनियाँमा लैजान आएको छु। त्यहाँ कुनै दु:ख हुँदैन। त्यो हो दैवी सम्बन्ध। यहाँ पहिला दु:ख हुन्छ स्त्री-पुरुषको सम्बन्धमा किनकि विकारी बन्छन्। तिमीलाई अब मैले त्यस दुनियाँको लायक बनाउँछु, जहाँ विकारको कुनै कुरा हुँदैन। यस काम विकारलाई महाशत्रु भनिएको छ जसले आदि-मध्य-अन्त्य दु:ख दिन्छ। क्रोधको लागि यस्तो भनिदैन– यसले आदि-मध्य-अन्त्य दु:ख दिन्छ, होइन। कामलाई जित्नु छ। यसले नै आदि-मध्य-अन्त्य दु:ख दिन्छ। पतित बनाउँछ। पतित शब्द विकारको लागि प्रयोग गरिन्छ। यस दुस्मनमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। तिमीले जानेका छौ– हामी स्वर्गका देवी-देवता बनिरहेका छौं। जबसम्म यो निश्चय हुँदैन, तबसम्म केही पाउन सकिँदैन।
बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– प्यारा बच्चाहरू ! मन, वचन कर्मले एक्युरेट बन्नु छ। मेहनत छ। दुनियाँमा यो कसैलाई थाहा छैन– तिमीले सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउँछौ। पछि गएर बुझ्छन्। चाहन्छन् पनि– एक विश्व, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा होस्। तिमीले सम्झाउन सक्छौ– आज भन्दा ५ हजार वर्ष पहिला सत्ययुगमा एक राज्य, एक धर्म थियो, जसलाई स्वर्ग भनिन्छ। रामराज्य र रावण राज्यलाई पनि कसैले जानेका छैनन्। १०० प्रतिशत तुच्छ बुद्धिबाट अब तिमी स्वच्छ बुद्धि बन्छौ, नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबाले बसेर तिमीलाई पढाउनु हुन्छ। केवल बाबाको मतमा चल। बाबा भन्नुहुन्छ– पुरानो दुनियाँमा रहेर पनि कमल फूल समान पवित्र बन। मलाई याद गरिराख। बाबाले आत्माहरूलाई सम्झाउनु हुन्छ। म आत्माहरूलाई नै पढाउन आएको छु, यी कर्मेन्द्रियहरूद्वारा। तिमी आत्माहरूले पनि कर्मेन्द्रियहरूद्वारा नै सुन्छौ। बच्चाहरू आत्म-अभिमानी बन्नु छ। यो त पुरानो छि-छि शरीर हो। तिमी ब्राह्मणहरू पूजाको लायक छैनौ। तिमी गायन लायक छौ, पुज्ने लायक देवता हुन्छन्। तिमीले श्रीमतमा विश्वलाई पवित्र स्वर्ग बनाउँछौ त्यसैले तिम्रो गायन छ। तिम्रो पूजा हुन सक्दैन। गायन केवल तिमी ब्राह्मणहरूको हुन्छ, नकि देवताहरूको। बाबाले तिमीलाई नै शूद्रबाट देवता बनाउनु हुन्छ। जगत् अम्बा वा ब्रह्मा आदिका मन्दिर बनाउँछन् तर उनीहरूलाई यिनी को हुन्, यो थाहा छैन। जगत् पिता त ब्रह्मा भए नि। उनलाई देवता भन्न मिल्दैन। देवताहरूका आत्मा र शरीर दुवै पवित्र हुन्छन्। अब तिम्रो आत्मा पवित्र हुँदै जान्छ। शरीर पवित्र छैन। अब तिमीले ईश्वरको मतमा विश्वलाई स्वर्ग बनाइरहेका छौ। तिमी पनि स्वर्गको लायक बनिरहेका छौ। सतोप्रधान अवश्य बन्नु छ। केवल तिमी ब्राह्मणहरूलाई नै बाबाले बसेर पढाउनु हुन्छ। ब्राह्मणको वृक्षको वृद्धि हुँदै जान्छ। ब्राह्मण जो पक्का बन्छन् उनीहरू गएर देवता बन्छन्। यो नयाँ वृक्ष हो। मायाको तुफान पनि लाग्छ। सत्ययुगमा कुनै तुफान लाग्दैन। यहाँ मायाले बाबाको यादमा बस्न दिँदैन। हामी चाहन्छौं बाबाको यादमा बसौं। तमोबाट सतोप्रधान बनौं। सारा कुरा यादमा आधारित छ। भारतवर्षको प्राचीन योग प्रसिद्ध छ। बेलायतीले पनि चाहन्छन्– कसैले प्राचीन योग सिकाओस्। अब योग पनि दुई प्रकारका छन्– एउटा छ हठयोग, अर्को छ राजयोग। तिमी हौ राजयोगी। यो भारतवर्षको प्राचीन राजयोग हो, जसलाई बाबाले नै सिकाउनु हुन्छ। केवल गीतामा मेरो सट्टामा कृष्णको नाम लेखिदिएका छन्। कति फरक पर्न जान्छ। शिवजयन्ती हुन्छ भने तिम्रो वैकुण्ठको पनि जयन्ती हुन्छ जसमा श्रीकृष्णको राज्य हुन्छ। तिमीले जानेका छौ– शिवबाबाको जयन्ती हुन्छ त्यसैले गीताको पनि जयन्ती हुन्छ। वैकुण्ठको पनि जयन्ती हुन्छ, जसमा तिमी पवित्र बन्छौ। कल्प पहिला जस्तै स्थापना गर्नुहुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ– मलाई याद गर। याद नगर्नाले मायाले केही न केही विकर्म गराउँछ। याद गरेनौ भने चोट लाग्छ। यादमा रहनाले थप्पड खाँदैनौ। यो बक्सिङ हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ– हाम्रो दुस्मन कुनै मनुष्य होइन। रावण हो दुस्मन।
बाबा भन्नुहुन्छ– यस समयको विवाह बर्बादी हो। एक-अर्कालाई बर्बाद गरिरहन्छन्, पतित बनाइदिन्छन्। अब पारलौकिक बाबाको आदेश छ– प्यारा बच्चाहरू! यो काम महाशत्रु हो। यसलाई जित र पवित्रताको प्रतिज्ञा गर। कोही पनि पतित नबनोस्। यस विकारले गर्दा तिमी जन्म-जन्मान्तर पतित बनेका छौ त्यसैले यसलाई काम महाशत्रु भनिन्छ। साधु-सन्त सबैले भन्छन्– पतित-पावन आउनुहोस्। सत्ययुगमा कोही पनि पतित हुँदैन। बाबा आएर ज्ञानले सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। अहिले सबै दुर्गतिमा छन्। ज्ञान दिने कोही पनि छैन। ज्ञान दिने एउटै ज्ञानसागर हुनुहुन्छ। ज्ञानले दिन हुन्छ। दिन हो रामको, रात हो रावणको। यी शब्दको यथार्थ अर्थ पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। केवल पुरुषार्थमा कमजोरी छ। बाबाले त राम्रोसँग सम्झाउनु हुन्छ। तिमीले ८४ जन्म पूरा गरेका छौ, अब पवित्र बनेर फर्केर जानु छ। तिमीलाई त शुद्ध अहंकार हुनुपर्छ। हामी आत्माहरूले बाबाको मतमा यस सृष्टिलाई स्वर्ग बनाइरहेका छौं, जुन स्वर्गमा फेरि राज्य गर्नेछौं। जति मेहनत गरिन्छ, त्यति पद पाइन्छ। चाहे राजा-रानी बन, चाहे प्रजा बन। राजा-रानी कसरी बन्छन्, त्यो पनि देखिरहेका छौ। फलो फादर गायन गरिन्छ, अहिलेको कुरा हो। लौकिक सम्बन्धको लागि भनिदैन। यहाँ बाबाले मत दिनुहुन्छ– म एकलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छन्। तिमीले बुझेका छौ– हामी अहिले श्रीमतमा चल्छौं। धेरैको सेवा गर्छौं। बच्चाहरू बाबाको पासमा आउँछन् भने शिवबाबाले पनि ज्ञानले बहलाउनु हुन्छ। यिनले पनि सिक्छन् नि। शिवबाबा भन्नुहुन्छ– म सबेरै आउँछु। ठीकै छ, फेरि कोही भेट्नको लागि आउँछन् भने के यिनले सम्झाउँदैनन् र! यस्तो कहाँ भन्छन् र– बाबा हजुर आएर सम्झाउनुहोस्, मैले सम्झाउँदिन। यो धेरै गुप्त कुरा हो नि। मैले त सबैभन्दा राम्ररी सम्झाउन सक्छु। तिमीले यस्तो किन सम्झन्छौ– शिवबाबाले मात्रै सम्झाउनु हुन्छ, यिनले सम्झाउँदैनन्। यो पनि जानेका छौ– कल्प पहिला यिनले सम्झाएका थिए, तब त यो पद पाएका हुन्। मम्माले पनि सम्झाउँथिन् नि। उनले पनि उच्च पद पाउँछिन्। मम्मा बाबालाई सूक्ष्मवतनमा देखिन्छ त्यसैले बच्चाहरूले फलो फादर गर्नु छ। समर्पित भएर पनि गरिब छन्, धनी हुन सक्दैनन्। गरिबले नै भन्छन्– बाबा, यो सबै हजुरको हो। शिवबाबा त दाता हुनुहुन्छ। उहाँले कहिल्यै लिनुहुन्न। बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ– यो सबै तिम्रो हो। मैले आफ्नो लागि न यहाँ, न त्यहाँ महल बनाउँछु। तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। अब यी ज्ञान रत्नले झोली भर्नु छ। मन्दिरमा गएर भन्छन्– मेरो झोली भर्नुहोस्। तर कुन प्रकारको, कुन चीजले झोली भर्ने... झोली भर्ने त लक्ष्मीले हो, जसले पैसा दिन्छिन्। शिवको पासमा त जाँदैनन्, शंकरको पासमा गएर भन्छन्। सम्झन्छन्– शिव र शंकर एउटै हुन् तर यस्तो कहाँ हो र।
बाबाले आएर सत्य कुरा बताउनु हुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ नै दु:ख-हर्ता सुख-कर्ता। तिमी बच्चाहरूलाई गृहस्थ व्यवहारमा पनि रहनु छ। धन्दा पनि गर्नु छ। हरेकले आफ्नो लागि राय माग्छन्– बाबा, हामीलाई यस कुरामा झूटो बोल्नुपर्छ। बाबाले हरेकको नाडी छामेर राय दिनुहुन्छ किनकि बाबाले सम्झनुहुन्छ– मैले भनूँ र उसले गर्न नसकोस्, त्यस्तो राय किन दिऊँ। नाडी हेरेर यस्तो राय दिइन्छ जुन गर्न पनि सकोस्। भनूँ र उसले नगरोस् फेरि त ऊ अवज्ञाकारीको लाइनमा आउँछ। हरेकको आ-आफ्नो हिसाब-किताब छ। सर्जन त एक हुनुहुन्छ, उहाँको पासमा आउनु पर्छ। उहाँले पूरा राय दिनुहुन्छ। सबैले सोध्नुपर्छ– बाबा, यस स्थितिमा म कसरी चल्नुपर्छ? अब के गरुँ? बाबाले स्वर्गमा त लैजानुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ– हामी स्वर्गवासी त बन्नेवाला छौं। अहिले हामी संगमवासी छौं। तिमी अहिले न नर्कमा छौ, न स्वर्गमा छौ। जो-जो ब्राह्मण बन्छन् उनीहरूको लंगर यस फोहोरी दुनियाँबाट उठिसकेको छ। तिमीले कलियुगी दुनियाँको किनारा छोडिसकेका छौ। कोही ब्राह्मण यादको यात्रामा धेरै अगाडि छन्, कोही कम। कसैले हात छोडिदिन्छन् अर्थात् फेरि कलियुगमा फर्किन्छन्। तिमीले जानेका छौ– खिवैयाले हामीलाई लैजादै हुनुहुन्छ। ती यात्रा त अनेक प्रकारका छन्। तिम्रो एउटै यात्रा छ। यो बिल्कुलै बेग्लै यात्रा हो। हो, तुफान आउँछ जसले यादलाई तोडिदिन्छ। यस यादको यात्रालाई राम्रोसँग पक्का गर। मेहनत गर। तिमी कर्मयोगी हौ। जति हुन सक्छ– हथ कार डे दिल यार डे... आधाकल्प तिमी प्रियतमाहरूले प्रियतमलाई याद गर्दै आयौ। बाबा यहाँ धेरै दु:ख छ, अब हामीलाई सुखधामको मालिक बनाउनुहोस्। यादको यात्रामा रह्यौ भने तिम्रो पाप खलास हुन्छ। तिमीले नै स्वर्गको वर्सा पाएका थियौ, अहिले गुमाएका छौ। भारतवर्ष स्वर्ग थियो त्यसैले भनिन्छ प्राचीन भारत। भारतलाई नै धेरै मान दिन्छन्। सबैभन्दा महान् पनि छ, सबैभन्दा पुरानो पनि छ। अहिले त भारत कति गरिब छ त्यसैले सबैले यसलाई मदत गर्छन्। उनीहरूले सम्झन्छन्– हाम्रो पासमा धेरै अनाज हुन्छ। कहींबाट मगाउनु पर्ने छैन तर यो त तिमीले जानेका छौ– विनाश सामुन्ने खडा छ। जसले राम्रोसँग बुझ्छन्– उनीहरूलाई भित्र धेरै खुसी हुन्छ। प्रदर्शनीमा कति आउँछन्। भन्छन्– तपाईंले सत्य भन्नुहुन्छ तर उनले बुझून्– हामीले बाबाबाट वर्सा लिनु छ, यो कहाँ बुद्धिमा बस्छ र! यहाँबाट बाहिर गयो खलास। तिमीले जानेका छौ– बाबाले हामीलाई स्वर्गमा लैजानुहुन्छ। त्यहाँ न गर्भ जेलमा, न त्यो जेलमा जान्छन्। अहिले जेलको यात्रा पनि कति सहज भएको छ। फेरि सत्ययुगमा कहिल्यै जेलको मुख देख्नु पर्दैन। दुवै जेल रहने छैनन्। यहाँ सबै यो मायाको पम्प हो। ठूला-ठूलालाई मानौं खलास गरिदिन्छन्। आज धेरै मान दिन्छन्, भोलि मान नै खलास। आज हरेक चीज चाँडै हुन्छ। मृत्यु पनि छिटो हुन्छ। सत्ययुगमा यस्तो कुनै उपद्रव हुँदैन। पछि गएर देख्छौ– के-के हुन्छ! धेरै भयंकर सीन हुन्छ। तिमी बच्चाहरूले साक्षात्कार पनि गरेका छौ। बच्चाहरूको लागि मुख्य हो यादको यात्रा। अच्छा!
मीठे-मीठे सिकीलधे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बापदादाको याद-प्यार एवं गुडमर्निङ्ग रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुडमर्निङ्ग, नमस्ते।
१) मनसा, वाचा, कर्मणा एकदम एक्युरेट बन्नु छ। ब्राह्मण बनेपछि कुनै पनि शूद्रको कर्म गर्नु हुँदैन।
२) बाबाद्वारा जुन राय मिल्छ त्यसमा पूरा-पूरा चलेर आज्ञाकारी बन्नु छ। हरेक कार्य कर्मयोगी बनेर गर्नु छ। ज्ञान रत्नद्वारा सबैको झोली भर्नु छ।
अमृतबेलाको महत्त्व लाई बुझेर यथार्थ रीति ले प्रयोग गर्ने सदा शक्ति सम्पन्न भव
स्वयंलाई शक्ति सम्पन्न बनाउनको लागि सधैं अमृतबेला तनको र मनको सैर गर। अमृतबेला समयको पनि सहयोग मिल्छ, सतोप्रधान स्टेज बुद्धिको पनि सहयोग मिल्छ। त्यसैले यस्तो वरदानी समयमा मनको स्थिति पनि धेरै शक्तिशाली स्थिति हुनु पर्छ। शक्तिशाली स्थिति अर्थात् बाबा समान बीजरूप स्थिति। साधारण स्थितिमा त कर्म गर्दै पनि रहन सक्छौ तर वरदानको समयलाई यथार्थ रीतिले प्रयोग गर्यौ भने कमजोरी समाप्त हुन्छ।
आफ्ना शक्तिहरूको खजानाद्वारा शक्तिहीन, परवश आत्मालाई शक्तिशाली बनाऊ।